Ny Semalt Expert Experts Semalt Islamabad 2 fomba hanakanana Spam referrer ao amin'ny Google Analytics
Ny tsipika fanamarinana dia ny fifamoivoizana mahatsiravina izay mametraka ny tranokalanao amin'ny rohy mampiahiahy, toy ny darodar.com, ary ny hafa. Ny Google Analytics dia manondro avy hatrany hoe avy aiza ny fifamoivoizana ary ny segondra segondra mitsidika ny tranokalanao.
Sohail Sadiq, manam-pahaizana manerantany avy amin'ny Semalt , dia manome toro-lalana mahasoa momba izany.
Raha mandray ny fifamoivoizana ianao, dia mety tsy ho lany tamingana ao amin'ny pejinao ny mpitsidika ao amin'ny tranonkalanao ary ny taham-pidirana dia ho 100% - best fake watches. Azo atao ny mamorona sivana izay manaisotra ny fifamoivoizana mifandraika amin'ny sehatra mampiahiahy. Raha ny fandrarana ireo mpandika-teny dia tokony ho azonao antoka fa hisoroka ireo hitsapana avy amin'ny tranokala tsy maninona sy malware ianao. Tokony hesorinao ao amin'ny kaontinao Google Analytics ihany koa izy ireo haingana araka izay tratra. Ireo sora-panavotana fanonerana (referendum) dia miasa amin'ny fampitahana ny lamin'ny sivana ary mametraka ny soatoavina hita ao amin'ny sombin-tsoratry ny Loharanon-kevitra.
Ahoana ny fomba fiasan'ny Referrer Spam?
Roa taona lasa izay, mpitsoa-ponenana Rosiana iray antsoina hoe Vitaly Popov no nizaka tao amin'ny kaonty Google Analytics ary nanampy tamim-pahombiazana ny loharanom-baovaon'ity spam ity. Ny URL tena marina dia mitarika any amin'ny tranonkala hafahafa ary tsy tokony hoheverina ho toy ny referral mandeha..Tsy vao voalohany izao no nanao toy izany ny mpanao hackers, i Alan Bush avy amin'ny Ignite Visibility dia miteny fa misy programa spam maro sy fandikan-dalàna izay manao fikaroham-boaogy sy fitarihana tranonkala ho an'ny serivisy SEO. Azonao sokafana amin'ny tranokalan-tserasera, tambajotra sosialy sosialy, ary ireo tranonkala hafa mainty hafa.
Ahoana no hanafoanana ny Spam momba ny referrer
Lalana # 1: Hanampy ny kaonty filtre
Azonao ampidirina ny kaonty fanariana fanivanana mba hanaisotra spam referrer. Mandehana any amin'ny Admin> Filterne> Fitaovana Custom Filter> Safidy Fomba Fiteny, ary mamorona filtre vaovao ahafahanao manampy tranokala maro ahiahiana araka izay tianao. Raha manana fomba fijery tsy filalaovana ianao, dia tokony hampidirinao hanasaraka filters izy ireo ary aza adino ny milaza ny filahanao toy ny darodar, bokotra-for-site ary ny hafa.
Lalana # 2: Mamorona ny segondra mahazatra
Azo atao ny mamorona sahan-kevitra manokana ao amin'ny fizarana Acquisition> sehatra / loharano. Ity fomba fiasa ity, na izany aza, dia ilaina raha mbola mitohy ny fifamoivoizana amin'ny fifamoivoizana ary ny lisitry ny tranonkalanao dia simba noho izany.
Raha toa ianao ka tsy te handany fotoana betsaka hanampiana tranonkala sy tranonkala referrer amin'ny filtres, dia azonao atao ny manatona ny Google Analytics tafiditra ao amin'ny sehatra Solutions Solutions izay ahafahanao mametraka mora foana ny spam referrer. Ataovy azo antoka fa nisintona ny hanafoanana ny fandefasana ny sisin'ny Analytics ianao ary nanaisotra ireo fanitsakitsahana diso rehetra nataon'ireo tatitra Google Analytics.
Mampalahelo fa tsy mitsahatra amin'ny fomba mahomby sy mahomby amin'ny spam ny spamers, saingy tsy misy zavatra mampanahy izany. Ampahany amin'ny asanao ny manaisotra azy ireo ary tsy mitsahatra mamorona sivana izay ahafahana mampiasa ireo tranonkala voatondro. Tokony hotadidinao fa tsy misy vahaolana iray voafetra ny habetsahanao hamaha ny spam rehetra, saingy azonao atao ny manafoana, mamantatra ary manavao azy ireo amin'ny fanitsiana ny fanovana ao amin'ny kaontinao Google Analytics. Raha efa nahazo rindrambaiko referanso ianao ao amin'ny kaonty Google Analytics, dia manamboara filtre avy hatrany.